Izinzuzo nokuphikisana kwe-aquaculture -I- | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Izinzuzo nokuphikisana kwe-aquaculture -I-
Ubhekene nobumpofu be- eziphilayo zasolwandle, kungani ungasebenzisi i-aquaculture? Iningi lama-salmon athengiswa eJalimane avela ku aquaculture. Kodwa-ke, lo mkhuba unezithiyo ezinkulu, abafuyi bavame ukusebenzisa izidakamizwa futhi amanzi angcoliswa yimfucuza engokwemvelo. Naphezu kwakho konke, ochwepheshe abathile bayaqiniseka ukuthi amapulazi okufuywa kwezinhlanzi zasemanzini angeke abe yindlela yokuvikela izilwandle kuphela, kodwa futhi abe yindlela yokondla abantu. inani labantu umhlaba kukhula njalo.
1 Umthombo wamaprotheni
2 Inhlanzi eyodwa kwezimbili ivela ku-aquaculture
3 Umkhuba ogxekwa kakhulu ngabezemvelo
Ku ukondla womuntu, inhlanzi ingumthombo wamaprotheni ohamba phambili emhlabeni, ngaphambi kwezinkukhu kanye nengulube. Eqinisweni, namuhla kuvumela abantu abangu-17% ukuthi bakwazi ukumboza okubalulekile kwezidingo zabo zamaprotheni. Eminyakeni eyi-10 kuye kwengu-15, isidingo sizobe sesiphindaphindwe ngo-2. Ngaphandle kwezolimo zasemanzini, akunakwenzeka ukuphendula izidingo amaprotheni labantu abakhulayo. I-aquaculture inenzuzo enkulu impela kunokulima izingulube noma izinkomo, ngoba izinhlanzi nezinye izinto eziphilayo zasolwandle zondla kancane kunezinhlanzi. isilwane komhlaba.
Ukukhiqiza ikhilogremu ye- yenkomo isibonelo, kuthatha ukudla okuphindwe kayishumi nanhlanu ukwedlula ukukhiqiza ikhilogremu yohlobo lwe-carp. Izinhlanzi empeleni zisebenzisa amandla amancane kunezinhlanzi. isilwane komhlaba, Futhi lokhu ngenxa yezizathu ezimbili. Ngakolunye uhlangothi, bayizilwane ezinegazi elibandayo, izinga lokushisa langaphakathi lijwayela kahle kakhulu kulelo lendawo abahlala kuyo. Ngakolunye uhlangothi, ukuhamba endaweni enamanzi kudinga umzamo omncane.
Inhlanzi eyodwa kwezimbili ivela ku-aquaculture
Ngokusho kwe-United Nations Food and Agriculture Organisation, uhhafu wezinhlanzi ezizenza zifakwe emapuletini ethu namuhla akuzona izinhlanzi zasendle. Noma kunjalo, ukubaluleka kwe- aquaculture kwehluka kuye ngezwe. Maphakathi neYurophu, njengaseJalimane, izinhlanzi zasendle zifunwa kakhulu. Kodwa-ke, eChina, i-aquaculture isiko leminyaka eyinkulungwane elidala kusukela ekuqaleni kokufuywa kwezinhlanzi. amatende. Kuze kube namuhla, iChina ngokungangabazeki iyizwe lokuqala kule nkampani engaphansi, ihlinzeka cishe izingxenye ezimbili kwezintathu zomkhiqizo wezinhlanzi emhlabeni jikelele aquaculture.
Umkhuba ogxekwa kakhulu ngabezemvelo
Njengoba i- i-acuiisiko Iyathuthuka, iheha ukugxeka okwengeziwe kusuka kososayensi bezemvelo, ngoba ikhulise inkinga yokudoba ngokweqile esikhundleni sokuyixazulula. Ngempela, izinhlobo eziningi zokuzingela zidla kakhulu, futhi zondla ezinye izinhlobo ezidotshwa kuzo medio zemvelo. Ukulima i-aquaculture tuna kuyinhlekelele enkulu, ngoba ngokungafani nesalmon, lolu hlobo alukwazi ukuzala luthunjiwe. Ngakho-ke abalimi babamba ama-tunas amancane asendle bese bebaphakela ngawo inhlanzi kuyabiza ubanjwe olwandle. Kukhiyiwe emakhejini, ama-tunas awanalo ithuba lokuphinda akhiqize.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » I-Ecology » Ezolimo zemvelo » Izinzuzo nokuphikisana kwe-aquaculture -I-
U-80% wamanzi omthombo waseChina angcoliswe kakhulu ukuthi angaphuzwa
AmaTigers amemezele ukuthi asephelile eCambodia